ပေ(၆၀) ရေတွင်းထဲကနေ အသက်ကိုစွန့်စားပြီး ရေသယ်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးများ
May 2, 2019 Cele Love 0
ပေ(၆၀) ရေတွင်းထဲကနေ အသက်ကိုစွန့်စားပြီး ရေသယ်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးများ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နေရာဒေသအများအပြားဟာ မိုးခေါင်ရေရှားမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေဟာလည်း မိသားစုအတွက် သောက်သုံးရယူပေးနိုင်ဖို့ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့အထိအောင် ကြိုးပမ်းနေကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ပိုင်းခရိုင်က ကျေးရွာ(၂၅) ရွာမှာဆိုရင် ရေအရင်းအမြစ်တွေ […]
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာမယ် အလွန့်အလွန်အားကောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဖန်နီ” ရဲ့ အရှိန်ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးမိုးရွာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက မေလ(၂)ရက် ညနေ(၄)နာရီက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မေလ(၂)ရက်ကနေ (၄)ရက်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကရင် ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ […]
တက်​စီ​မောင်းပြီ လင်​ဝတ္တရား​ကျေပွန်​စွာ ဖြင့်​ရှာ​ဖွေ​ကျွေး​မွေးထားသော ဇနီးအား ဘောပြားမမှ သွေးဆောင်ခိုးပြေး ကျွန်​​တော်​ ဝဏ္ဏထွန်း၏ တရားဝင်​ လက်​ထက်​ယူထား​သော အမျိုးသမီးအား ဖြား​ယောင်း​သွေး​ဆောင်​​ခေါ်​ဆောင်​သွားသူနှငိ့ ကူညီအား​ပေးခဲ့သူများအား ဥပ​ဒေနှငိ့အညီ ထိ​ရောက်​စွာ အ​ရေးယူမည်​ဖြစ်​​ကြောင်း သက်​ဆိုင်​သူများအားသိ​စေအပ်​ပါ တယ် …။ ကျွန်​​တော်​ သည်​ တက်​စီ​မောင်းပြီ လင်​ဝတ္တရား​ကျေပွန်​စွာ ဖြင့်​ ရှာ​ဖွေ​ကျွေး​မွေးပြီ […]
အစ်မရှိတဲ့သူတွေပဲ ရရှိနိုင်မယ့် အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားများ သွေးသားရင်း ညီအစ်မရှိတဲ့သူတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ကံအကောင်းဆုံးသူတွေထဲမှာ အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။အစ်မဆိုတာ ညီမတွေအတွက်တော့ ပထမဆုံးအားကျခဲ့ရတဲ့ စံပြလူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သလို၊ လေးစားအတုယူစရာကောင်းပြီး အမြဲတမ်း နွေးထွေးမှုတွေ ပေးနိုင်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အစ်မရှိတဲ့သူတွေပဲ ရနိုင်မယ့် အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
အိမ်တွင်းဖြစ်နဲ့ သင့်ရဲ့သွားတွေ သုံးမိနစ်အတွင်း ဖြူသွားမည် ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မိမိသွားတွေသန့်ရှင်းပြီး ဖြူဖွေးစေဘို့ သွားဆရာဝန်ရဲ့ ဝန်ဆောင်စရိတ်က ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်။ ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေး ငွေပေးကဒ်နဲ့ ရှင်းလိုက်ယုံပါဘဲ …။ တကယ်ဆိုရင် မိမိအိမ်တွင်းမှာ ဈေးတွင်းမှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့တင် မိမိသွားကို အလှဆင်လို့ […]
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ “၃ နှစ်၊ ၃ လ၊ ၃ ရက် ဂူအောင်းတရားကျင့်ရန်အတွက်” ဂူထဲမ၀င်ခင် မိန့်ကြားချက်များ (၁၇-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ညဦးပိုင်းအချိန် မိုင်းဖုန်းကျောင်းဗောဓိညောင်ပင်ရင်း၌မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမှအဓိဌာန်ဂူမဝင်ခင်ဟောကြားသည့်တရားတော်အားဘာသာပြန်ဆို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ….. ။ အေးချမ်းတဲ့နေ့ရက်ကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်အခါသမယဆရာဒကာတွေ လာတွေ့ဆုံကြတယ်၊ သာသနာနှစ် မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာ ၂၅၆၃ နှစ်ထဲမှာ (၆)လ(ရှမ်း လ) […]
အမျိုးသမီးအိမ်သာ CCTV တပ်ခွင့်ရှိလား… အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းထဲကအိမ်သာမှာ… မိန်းကလေးတွေသတိထားမိဖိုိ့”
“အမျိုးသမီးအိမ်သာ CCTV တပ်ခွင့်ရှိလား… အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းထဲကအိမ်သာမှာ… မိန်းကလေးတွေသတိထားမိဖိုိ့” 36 ဂိတ် ရဲစခန်းနားက အများသုံးအိမ်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။အများပြည်သူသုံး မိန်းခလေးအိမ်သာမှာ CCTV တပ် လို့ရလား ?ငွေကောက်တဲ့သူကိုမေးလိုက်တော့ ကြောင်တောင်တောင် ကြီး ဖြေတယ် …. ။အဲဒါ ဘယ်သူမှ မသုံးဘူးတဲ့ ။သေနေတာတဲ့ ။ […]
ကျောက်ပန်းတောင်း အသတ်ခံရတဲ့ မြွေမကြီးမှာ ကလေးမွေးပြီးတာ ၃ ရက်ပဲရှိသေး သူ့ကိုသတ်သူအား မြွေကိုယ်​တိုင်​ဝင်​ပူးပြီး သူအ​ရေခွံကိုသူ့တွင်းဝမှာထား​ပေးရန်​ပြောသည် …. ။ ကျောက်​ပန်း​တောင်းမြို့​အောင်​မင်္ဂရပ်​ကွက်​ ကြွယ်​ဝ​တောင်​ဘုရားအနီး29-4-2019 ..မှ..30ရက်​​နေ့ဖြစ်​ရပ်​​လေးပါ။​ယခုပုံပါ လူငယ်​မှ ​မွေးကြီးအား သတ်​၍ အ​ရေခွံဆုပ်​ အပြီးအသတ်​ခံရ​သော ​မွေမကြီးမှ ဝင်​ပူး​နေသည်​မှာ ၂ရက်​ ရှိပါပြီ …. ။ […]
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ် …. ။ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ […]